Esi eweputa ihe oyiyi na WordPress? | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | Nchịkọta, CRM na Nnukwu data, Marketing
Onye ọ bụla maara na WordPress bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ọrụ họọrọ iji malite ọdịnaya ha ma ọ bụ blọọgụ nke ụdị ọ bụla. Dịka ọ bụ usoro njikwa ọdịnaya dị ike malitere na May 27, 2003, lekwasịrị anya na ịmepụta ụdị ibe weebụ ọ bụla. Si na-enweta nnukwu ewu ewu na ịde blọgụ, ka oge na-aga bụrụ otu n'ime ngwaọrụ ndị bụ isi maka ịmepụta ibe weebụ.
Ebe o na enyere anyi aka imegharia usoro nke ihe omuma n’ime uzo di nma na nke oma n’otu oge. Ebee ka ekwesighi ichefu ya na WordPress bu ezigbo usoro diri webusaiti nke na-emelite ya oge nile. Ọ bụrụ na edere ọdịnaya ugboro ole, mgbe mmadụ nwetara weebụsaịtị, ha nwere ike ịchọta ọdịnaya ahụ niile n'usoro oge (nke kacha ọhụrụ na nke ikpeazụ na nke kacha ochie).
Ma ihe ọzọ dị nnọọ iche mgbe ọ na-abịa na-edepụta ihe oyiyi WordPress. N'ihi na ọ ga-abụ atụmatụ nke n'ikpeazụ ga-enyere anyị aka melite ọdịnaya niile na anyị na-etinye aka na blọọgụ anyị site ugbu a gaa n'ihu. Na na anyị nwere ike iwepụta ihe karịrị otu nkuzi yana na anyị ga-eweta n'okpuru iji nwaa ndị ọrụ mara otu esi eji akụ a, nke dị oke mkpa maka akụkụ dị mma nke ndị ọrụ.
1 Na-ebuli ihe oyiyi wordpress: ọ dị ezigbo mkpa
2 Kedu otu esi ahọrọ oke foto?
3 Kacha mkpa uru nke wordpress
4 Uru nyiwe
Na-ebuli ihe oyiyi wordpress: ọ dị ezigbo mkpa
Ihe oyiyi ahụ dị n'ọtụtụ oge ihe na-akpata ya na weebụ na-ewe ogologo oge karịa akaụntụ ahụ. Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị na-ebugote na na-ebugote ihe oyiyi na-enweghị njikwa na ebe nrụọrụ weebụ gị, emela ka nsogbu gị dị na ịchọ ezigbo Bochum maka WordPress gị n'ihi na ọ dịghị nke ọ bụla. Ọ bụ ya mere ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mkpa mgbe ị na-achọpụta ikpo okwu a n'ịntanetị.
N'echiche a, enwere plugins abụọ nwere onwe ha kpamkpam, mana anyị ga-arụ ọrụ karịa ma ọ bụrụ na weebụsaịtị anyị nwere ọtụtụ onyonyo. Ndị a bụ ndị anyị ga-ewetara gị n'okpuru:
Iberibe bụ ngwa mgbakwunye bara ezigbo uru site na echiche nke ga-agbanwe nha nke onyogho niile anyị nwere na weebụsaịtị anyị ugbu a na ndị anyị na-ebugo ma emechaa.
WP Smush bụ ngwa mgbakwunye ọzọ amaara ama nke ga-ebuli onyogho niile anyị nwere, mana ọ ga-ebuli ma gbanwee nha ndị anyị buliri na-akpaghị aka.
Kedu otu esi ahọrọ oke foto?
Nke a bụ nzọụkwụ ọzọ ị ga - eme ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie iji bulie onyonyo na wordpress. Maka na, ọ nwere ike inye gị ụfọdụ ntuziaka ị ga-agbaso iji zụlite ọrụ a dị mkpa na ahịa dijitalụ ma ọ bụ n'ịntanetị. Site na omume ndị a anyị ga - egosi gị ugbu a.
N'ịmara na anyị ga-agbanwe ogo nke onyonyo anyị, anyị ga-amarịrị ụdị nha ịhọrọ karịa. Ebe odi nkpa ka ichoputa ihe omuma ndi ozo na nke a bu ihe di nkpa, n'ihi na o dabere n'otu aka na udiri weebụsaịtị.
Ebe nrụọrụ weebụ na-ese foto abụghị otu onye na-etinye obere ihe oyiyi n'ime posts. Ma nke template, ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere oke ihuenyo obosara, na-eji nha thumbnails dị iche iche, wdg.
Tfọdụ aghụghọ iji rue ihe mgbaru ọsọ a nke ndị ọrụ chọrọ bụ ndị a:
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ igosi na mmemme ahụ bụ nha kachasị nke anyi ga-emezi ihe ndị anyị ga-ebugo. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-achọ ihe oyiyi niile na a hà ma ọ bụ karịa a na ọ ga-clip ha na-akpaghị aka.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịhazi onyonyo nke posts na ibe, ndị ị bugoro ozugbo na ọbá akwụkwọ na ndị a na-ebugo iche iche, dị ka ndị nke isiokwu na-ebugo.
Na-echefughi oge ọ bụla na ihe oyiyi niile anyị buliri ga-agbanwe na nha ahọrọ, mana anyị achọghị ya.
Ozugbo anyi nwere onyonyo zuru oke, ihe anyi kwesiri ime buooebuli ha ka ha ghara ibu ibu. Na mberede, ndị niile ebugoro site ugbu a gaa n'ihu ga-emeziwanye ma gbanwee. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji jiri ngwa mgbakwunye nke na-enye anyị obi ike ka ukwuu. N'agbanyeghị uru ị ga-enye ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa.
Kacha mkpa uru nke wordpress
N'ezie, nkwado ozi a ewepụtala ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere ndị njikwa ọdịnaya ndị ọzọ. Ruo n'ókè na ọ bụ ma bụrụ otu n'ime ndị njikwa ọdịnaya kachasị eji n'ụwa. Dịka ọmụmaatụ, na ọnọdụ ndị na-esonụ anyị ga-akọwa n'okpuru:
Ikwu na nnwere onwe
Ọ bụ ụdị sọftụwia mepụtara altruistically site na ọtụtụ puku ndị mmepe na-emekọrịta iji melite ya kwa ụbọchị. A na-akpọ ya n'efu n'ihi na inwere onwe gị ime ihe ọ bụla ịchọrọ na ya n'efu.
Anaghị achọ tupu mmụta
Nwere ike ịmepụta weebụsaịtị gị site na mmalite ruo na njedebe n'enweghị ihe ngosi nke mmemme. Ewezuga nhọrọ ndị dị elu, nke ị na-agaghị emetụ iji wuo ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ ma rụọ ọrụ, ịkwesighi ịmetụ ma ọ bụ ghọta koodu ọ bụla iji rụọ ọrụ na weebụsaịtị gị kwa ụbọchị.
Ntinye WordPress mbụ nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya na mbụ. Mana ozugbo arụnyere, inwe ike imelite ọdịnaya ahụ, mepụta ibe ọhụụ na isiokwu, bulite akwụkwọ, dị mfe. Oge agafeela oge ichere izu maka onye na-elekọta gị ka ọ gbanwee iji gbanwee ahịrịokwu na webụsaịtị gị ... Ugbu a ị nwere ike ịme ya ọfụma na enweghị dabere na ndị ọzọ.
Dị nnọọ mfe mmepe
N'aka nke ọzọ, WordPress bụ usoro ịde blọgụ kacha mma ị nwere ike ịchọta n'ahịa. Ọ na-enye gị ohere ịhazi ọdịnaya, nwee atụmatụ mara mma, hazie oge mbipụta gị, jikọta bọtịnụ mmekọrịta iji kesaa ọdịnaya gị, jikọta ụdị ndebanye na listi nzipu ozi gị. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na blọọgụ gị ga-adị mfe nfe karịa nke emere n'elu ikpo okwu ọzọ, echere m na enweghị obi abụọ ihe kpatara m ji kwuo nke a.
N'ikpeazụ, ị gaghị echefu na n'oge a enweghi obi abụọ ọ bụla na n'ikpeazụ ọkachamara WordPress mmemme na-enye gị ohere ịmepụta ihe ọhụrụ karịa ụdị ndị ọzọ. Taa, anyị na-asọfụ karịa site na ekwentị mkpanaaka dịka smartphones ma ọ bụ mbadamba, na ebe nrụọrụ weebụ gị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na nyiwe niile dị mkpa. Echefula ndị na-agụ ma ọ bụ ndị ahịa naanị n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ gị anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaaka.
N'ezie, nke a bụ otu n'ime nyiwe kachasị mma ị nwere ike ịrara iji bipụta ọdịnaya gị. Ruo n'ókè na ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị kachasị eji eme ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a, mana ọ nwere njedebe ya, ebe ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịghọta ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụrụ na nke a bụ okwu ikpe gị, ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịga ụfọdụ nkọwa anyị ga-eweta n'okpuru.
Usoro a nwere ike iduga gị na ị na-echekwa ọdịnaya gị n'ụzọ bara uru ma dị irè maka ọdịmma gị ma ọ bụ ọkachamara gị. Site na inweta uru nke ga-adabere na mgbe niile. Nakwa eziokwu ahụ na ọ nwere ike ịbụ ngwaọrụ kachasị mma nke mere na site ugbu a gaa n'ihu, ị ga-enwe ike ịmatakwu usoro azụmahịa gị na mpaghara dijitalụ ma ọ bụ akara. Yabụ n'ụzọ dị otu a, enwere ike ịnwetanwu maka azụmahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ edemede gị.
Onyinye ọzọ dị ezigbo mkpa bụ nke sitere na mkpụrụedemede ya. Nke ahụ bụ, ọ ga-adabere na onyinye ị nwere ike ịnye na azụmahịa gị. Ruo n'ókè ọ nwere ike ịbara gị uru na ọrụ nke ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị na-atọ ụtọ yana na ọ na-enye ohere ịnweta usoro nke ọdịnaya nwere ike ịmasị. Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bụ ụzọ iji mepụta ọkwa dị elu nke iguzosi ike n'ihe n'etiti ndị abụọ ahụ. Nke ahụ bụ, n'etiti ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na ndị na-agụ ya ma ọ bụ ndị ahịa ya ka e nwee njikọ nke ọrụ ka ha abụọ wee rite uru na mmekọrịta ndị a pụrụ iche.
Mgbe n'ikpeazụ, ị gaghị echefu na mmemme a, nke nwere ike ịnweta ndị ọrụ niile, dị mfe maka mmadụ niile. N’echiche na ọ dịghị mkpa ị nye ọkwa ọkwa mmụta dị elu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, enwela obi abụọ na n'ikpeazụ eziokwu nke na-ebuli ihe oyiyi na wordpress usoro dị ka onye ọ bụla ma ọ bụghị nanị ole na ole dị ka mgbe itịbe na ndị ọzọ omume na yiri àgwà. Ọ bụ otu akụkụ nke ị nwere ike isi nweta ọtụtụ akụrụngwa maka mmepe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ịntanetị. Na njedebe nke ụbọchị otu n'ime ihe mgbaru ọsọ dị ukwuu nke ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Esi eweputa ihe oyiyi na WordPress?
Uru nke bootstrapping maka eCommerce
Know maara ihe ịzụ ahịa bụ?